The Rockနဲ့ မိသားစု Covid ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့…. – သတင်းထူး – Thadin Htoo
The Rockနဲ့ မိသားစု Covid ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့….
ဂျွန်ဆင်မိသားစုဟာ အလွန်နီးကပ်တဲ့ မိသားစု မိတ်တွေများထံမှ COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သူတို့ကတော မည်သို့ ကူးစက်ခံခဲ့ကြရကြောင်း မသိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ “ဒီဟာက မိသားစုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြုံခဲ့သမျှ စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဆုံးနဲ့ အခက်ခဲဆုံး ကြံ့ကြံ့ခံရတာပါပဲ” လို့ မင်းသားဂျွန်ဆင်က Instagram ဗီဒီယိုမှာ ပြောထားပါတယ်။
တောင်ဥက္ကလာ နေ ပိုးတွေ့လူနာ မြောက်ဒဂုံ CAPITAL စူပါမားကတ် ဝန်ထမ်းဖြစ်…